PEUGEOT (508) , 2015 , MDY – Super Seven Stars
PEUGEOT (508) , 2015 , MDY
Buy For 53 000$
Warranty Expiry Date 1 - Auguest - 2019
Insurance Expiry Date 28 . September . 2018
Pre Owned ကားများအား ၀ယ်ယူလိုပါက လက်ငင်းငွေချေစနစ် (သို့မဟုတ်) (၁) နှစ် မှ (၃) နှစ်အထိ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့်ဝယ်ယူပြီး ကားတန်ဖိုး၏ ၃၀ % ပေးချေပြီး ကားအား ရယူပိုင်ဆိုင်နိူင်ပါတယ်….
Pre Owned ကားများအကြောင်း အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက Facebook – Super Seven Stars ထဲသို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိူင်ပြီး (သို့မဟုတ်) ဖုန်းနံပါတ် – 09 977 333 999 ,09 969 933 637 , 09 969 933 649 သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်…
Peugeot 508 သည် Sedan ကားအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး မောင်းနှင်ရာတွင် ငြိမ့်ညောင်းဇိမ်ကျမှုနှင့် စတိုင်ကျလှပမှုကိုဦးစားပေးထုတ်လုပ်ထားသည့်ကားအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။
ယာဉ်မောင်းနေရာအား Jet Fighter Concept ပုံစံဖြင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပေးထားသဖြင့် ယာဉ်မောင်းသူအနေဖြင့် လေယာဉ်တစ်စီး မောင်းနှင်နေရသော ခံစားမှုမျိုးကို ခံစားရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
ခေတ်မှီလှပပြီး ကြည်လင်ပြတ်သားသည့် မြင်ကွင်းကျယ် Premium Vision Cluster
ကားမောင်းနှင်ရာမှာလဲ Head up Display ပါဝင်မှုကြောင့် ကား၏အမြန်နှုန်း/ cruise ဖြင့် မောင်းနှင်နေသော နှုန်း/speed limit များကို Dash Board ပေါ်တွင် Screen သီးခြားဖော်ပြပေးနိုင်သဖြင့် မောင်းနှင်သူမှာ ဒိုင်ခွက်ကိုငုံကြည့်စရာမလိုပဲ မြင်နိုင်သဖြင့် မောင်းနှင်ရာမှာ ပိုမိုအဆင်ပြေစေပါသည်။
Manual gear အဖြစ် ပြောင်းလဲမောင်းနှင် သောအခါ Steering မှလက်ရွေ့အသုံးပြုရန်မလိုဘဲ Gear ကို Manual သို့ပြောင်းပြီးပါက အဆိုပါ Puddle sifter gear ကို အတိုးအလျော့ ပြုလုပ်ရုံဖြင့်မောင်းနှင်နိုင်ပါသည်။
7″ inch Multi – Function Touchscreen ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် များစွာသော Shortcuts များကိုလုပ်ဆောင်ရာတွင် လွယ်ကူလျှင်မြန်စေပါသည်။
ကားစက်နှိုးရာတွင် Key အားလှည့်နေစရာမလိုဘဲ push-start ခလုတ်တချက်နှိပ်ရုံဖြင့် စက်နှိုးရာတွင်လွယ်ကူလျှင်မြန်စေပါသည်။
Rear Air Ventilation ပါဝင်သောကြောင့် ကားအနောက်ဘက်ရှိစီးနှင်းသူများဆီသို့လည်းAir Con လေရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ပြင် ဖုန်းနှင့် Electric ပစ္စည်းများအားသွင်းနိုင်သည့် 12 V power supply လည်းပါရှိပါသည်။
peugeot 508 ကားအတွင်းပိုင်းမှာကျယ်ဝန်း၍ စတိုင်ကျလှပပြီး Seat များကို Leather အစစ်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားပါသည်။
Front Lamps မှာ Full LED Technology ဖြစ်၍ အလင်းအားထုတ်လုပ်မှု ပမာဏများသည့် အတွက်ကြောင့် လမ်းနှင့်အရာဝတ္ထုများအား ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကောင်းစွာမြင်နိုင်ပါသည်။
Rear Lamps ဒီဇိုင်းမှာ Peugeot ၏ နာမည်ကျော်ခြင်္သေ့လက်သဲခြစ်ရာ LED Tails Light ဒီဇိုင်းဖြင့် ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
Reverse View Camera ပါရှိသည့်အတွက်ကြောင့် ကားနောက်ဆုတ်ခြင်းနှင့် ကားပါကင်ထိုးရာတွင်လဲ လွယ်ကူအဆင်ပြေစေပါသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်သဘာဝအလှအပရသပေါင်းစုံကို sunroof မှတဆင့်အပြည့်အ၀ ခံစားနိုင်မည့်အပြင်sunroof ၏အောက်တွင်လဲ Sunshade ပါဝင်ပါသည်။
Engine power 2.0 /6Speed Auto Transmission ဖြစ်သည့်အတွက် ဆီစားသက်သာစေပါသည်။
ကားထိခိုက်မှုအန္တရယ်များမှ ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရန် Safety အတွက် Air Bags6လုံးပါရှိပါသည်.
ကားအနောက်ဘက် Design အသွင်အပြင်ကို ယခင်မော်ဒယ်ဟောင်းများနှင့် မတူကွဲပြားစေရန်အတွက် ဒီဇိုင်းအချိုးအကွေ့များကို အသေးစိတ် ဖန်တီးဆန်းသစ်ရေးဆွဲထားေ
အသေးစိတ် သိရှိလိုပါက ဖုန်းနံပါတ် 09 977 333 999 ,09 969 933 637 , 09 969 933 649သို့ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်…….
Super Seven Stars Motors မှ ရောင်းချပေးနေသည့် Pre Owned ကားများကို Cash Down (သို့မဟုတ်) Hire Purchase စနစ်ဖြင့် ၀ယ်ယူနိူင်ပါတယ်။